Kowda Luulyo--Happy Independence Day - Page 18 - General - Somali Forum - Somalia Online
Wow..those are some celebrations! Thanks for the videos and pictures, MMA and Liibaan.
Adaa mudan, abaayadiis.
Soomaalida Shiinaha oo xustay Munaasabadda 1-da Luulyo
Xaflad qurxoon oo lagu maamuusayay xuska 1-da luulyo ayna kula lamaansaneyd xaflad sagootin ah oo looo sameeyay arday Somaliyeed oo ka qalin jabisay Jamacada Beihua University ayaa ka dhacday Magaalada Jilin ee dalka Shiinaha.
Xafladaan oo ay soo qaban qaabiyeen Gudoonka ardayda Somaliyeed ee Jamacadaan dhigata, kuwaa oo uu Gudoomiye uu sanadkaan u yahay Mudane C/Raxmaan Maxamed Xasan.
Xaflada waxaa ka soo qayb-galay arday badan oo Soomali ah oo ka kala yimid Gobolada qaar ee dalkaan, halkaas oo ardaydu ay isu dhaafsadeen wixii taariikh ah ay dalka isu dhaameen, kuna dheehneyd Suugaanta Wadaniga iyo dhamaan waxkasta oo ninkastaa uu ula soo diyaar garoobay inuu kaga qayb galo xuska maalinka xoriyada wadankiisa.
Waxaan meesha kamarneyn in qofwalba uu uhambalyeynayay 3 arday oo shalay ka qalin jabisay Jamacadaan, waxaana ardaydii nasiibka u yeelatay inay Jaamacadaan ka qalin jabiso ay kala noqdeen Dr Daahir, Drs Safa iyo Drs Sahra.
Ugu dambeen dhamaanba ardaydaan Soomaaliyeed ayaa waxay duco ay u jeediyeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed, iyagoona ugu duceeyay in sanadkaan sanadkiisa uu Alle ku gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo.
Xaflad lagu Xusayey Maalinta 1-da Luulyo oo lagu qabtay magaalada Olten ee dalka Switzerland
Waxaa habeenkii Axadda ahayd ee 1-da Luulyo si weyn looga dabaal dagay magaalada Olten oo ku taala gobolka Solothurn ee dalkan Switzerland munaasabada 1-da Luulyo oo ah maalin ay si weyn u qadiriyaan Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan.
Munaasabadan oo ka dhacday magaalada Olten ee gobolka Solothurn ayaa waxaa ka soo qayb galay Boqolaal Jaaliyadda Soomaaliyeed ah ee ku nool dalkan Switzerland, waxaana Halkaasi ay isugu Jeediyeen Shacabka Soomaaliyeedna ugu Hambalyeeyeen Munaasada ku aadan 1-da Luulyo oo ah Malinta Xornimada Gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Israacii Goboladii Waqooyi iyo Koonfur.
Helsinki, Finland 2012:
Ururka Dhalinyarada ee KANAVA oo Helsing ku qabtay Munaasabada 1-da Luulyo
Xaflad aad aad u balaaran oo ay kasoo qeyb galeen dhamaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Helsinki ee dalka finalnd laguna xusayey sanadguuradii 52aad ee maalintii xorrnimadda Soomaaliyeed ee 1 luulyo ayaa lagu qabtey Dalkaaasi
Xafladan oo aheyd mid si heer sare loo soo agaasimey ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada soomaaliyeed ee KANAVA Waxaana ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka kanava C/qaadir Nuur Hadafow oo hambalyo balaran u diray umadda soomaaliyeed meel wabo ay dunida ka joogaan gaar ahaan umada ku dhaqan dalka filand waxaana u u rajeeyay in sanadkan kiisa kale uu illaah kugaarsiiyo umaada Soomaaliyed ku gaarsiiyo nabad iyo baraare
Sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay waxgaradka ku sugan dalka finland kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyada ay maalintan u leedahay umadda soomaaliyeed iyo dhibaatadii laga soo maray xornimada aynu maanta kunaalooneyno.
Sidoo kale waxaa xafaladaii maanta bilado lagu gudoonsiiyay ilaa iyo 3 kooxood oo iyagu kamid ahaa 10 kooxoood oo aha dhalinyaro yaryar ah oo ciyaaro kubadda cagta ah uga socday dalka filand ciyaarahaas oo loogu talagalay sanadguurada xuska maalinta xornimada soomaaliyeed ee 1da luulyo.
Xuska maalintan kuweyn umadda Soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qeybgalay Orodyahano soomaaliyeed oo iyagu kaqeybgalay orodada qaarada yurub oo kakla yimid wadamada Holand iyo Bilgiumka waxaana ay ku dhiirageliyeen dhalintada yar yar ee Soomaaliyeed ee ku mashquulsan kubadda cagta in ay kaqeybqaataan ciyaaraha fudud.
Oslo, Norway 2012:
Oslo oo si weyn looga xusay Kowda Luulyo
Xaflad weyn oo lagu xusayay maalinta 1-da Luulyo ee xoriyadda Soomaalida koonfureed iyo israacii Wuqooyiga iyo Koonfurta ay ku midooween sanadkii 1960 ayaa waxey ka dhacday fagaarahasofienbergparken magaalada Oslo ee dalka Norway.
Xafladdan oo ay kasoo qeybgaleen dadweyne aad u tira badan oo badankooda xernaa astaanta iyo midabada calanka Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayay shucuur wadaninimo.
Waxaa halkaasi ka mid ahaa dadkii ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya C/samad Maxamuud Xassan , taliya waaxda socdaalka C/laahi Gaafow oo ku nuux nuuxsaday in la taageero habsami usocodka nabadda Soomaaliya , waxaana sidoo kale halkaasi dhiiri galin iyo taariikhdii halganka ka iftiimiya halgamaa C/qaadir Cali Boolaay oo ah ragga fara ku tiriska ah ee ka nool dhalinyaradii ku jirtay SYL.
Gothenburg, Iswiidhan 2012:
1-da luulyo oo si weyn looga xusay magaalada Gothenburg
Xaflada si heer sare loo soo qabanqaabiyay oo ku saabsan dabaaldeegga xuska sanadguurada 52 ee madaxbanaanida gobollada koonfureed iyo midowga Somaaliya ayaa lagu qabtay hoolka wayn Volviahallen ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden maalinta sabtida 30-ka june 2012.
Xafladda waxaa lagu furay ayaado quràan ah. Kadibna heesta astaanta calanka soomaaliya ayaa la saaray oo dadka oo dhan u wada istaageen.
Waxaa Baraambur iyo gabayo wadani ah qaaday Sacdiyo Soomali, Abwaan Hurfe, Caasha Cuud, Hussein Adde, Safiya Foodcadde , Farhiya Tifow iyo Saadiq Seyga.
Marti sharafta qudbada ka jeedisay goobta waxaa ka mid aha Mudane Jaamac Ali Jamac oo ah Musharrax u tartamaayo Madaxwynenimo ee dalka Soomaaliya. Mudane Jaamac wuxuu warbixin dheer ka bixiyay xilligii gobanima doonka Soomaliyeed iyo marxaladihii kala duwanaa ee wadanka soo maray.
Waxaa isana goobta ka hadlay Macallin Ismail Ali Abdulle oo ku guubaayiyay Soomalida qurbaha deggan in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, gaar ahaan in la taakuleeyo ciidamadda dawladda Somaaliya.
Waxaa dhinaca haweeynka u hadlay Shamso Dahir oo ka hadashay midnimada iyo wadajirka Soomalida.
Xafladaasi oo si wadajir ah ay u soo abaabuleen Jaaliyadaha ka tirsan magaalada Gothenburg.
Xiriiriyaha barnaamijka waxaa si wanaagsan u daadihinaysay Wariye Anfac Caddow oo ka tirsan bahda Somaliwayn tv. Bahda warbaahinta waxaa ka mid ahaa Hussein Abdi Alasow oo ah soo saaraha Somaliwayn tv. Hussein Alasow waa madaale had iyo jeer u taagan hawlaha hurumarinta bulshada Somaaliyeed dhinaca saxaafadda..
Ugu dambayn waxaa mahad gaar ah loo celiyay Ibrahim Qalinle, Abdullahi Jawhar, Ahmed Arabey iyo Adam Oor oo dhammaantood sii Soomaalinimo ah soo qaban qaabiyay xafladda sanad guurada 52ad oo qiimaha leh.
Columbus, Mareykanka 2012:
Sida 1-da Luulyo looga xusay Ohio
Boqolaal qof oo Soomaali ah oo ku nool waddanka Mareykanka ayaa xalay ka qeybgalay xaflad lagu maamuusayay 52 guuradii ka soo wareegatay xilliga xornnimada gobollada koonfureed iyo israacii waqooyi iyo koonfur.
Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka qeybgalay dadwayne Soomaaliyeed oo ku labisan calanka isla markaana ku dhawaaqayay 1-Luulyo ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo iyo erayo kale.
Waxaa goobta xafladda ka hadlay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka hadlayay qaabkii lagu helay xorriyada iyo halgankii loo soo maray.
Xafladii Kowda Luulyo iyo Minneapolis
Dibad bax lagu xusayo 1 da Julay oo ah 52 sano kahor markii ay gobolada Koofureed ee Soomalia ay iska tureen heeryadii gumeysiga isla mar ahaantaana ay lamidoobeen gobolada woqooyi ayaa galabta lagu qabtey magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo ah meesha ugu soomalida badan wadankaan.
Dibadbaxaan ayaa waxa uu kadhacay bartamaha magaalada Minneapolis, iyadoo loo xiray dibad baxaani wadooyin dhawr ah oo dhex mara is magaalada,waxaa ka soo qeybgalay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu ku dhaqan tahay, waxaa sidoo kale iyaguna munaasibadan kala soo qeybgalay dad kale oo ka socday bulshooyinka kale ee ku nool wadankaan.
Waxaa sidoo kale halkaasi kahadley Fardawso Jaamac kuhadleysay magaca haweenka Soomaaliyeed, waxayna sheegtay in mar waliba haweenku utaaganyihiin iney garab sitaagaan cid waliba oo wax uqabaneyso wadankeena hooyo, iyadoo intaasi raacisey “Ninkii daneynaayo inuu kashaqeeyo nabad kusoo dabaalida wadankeena hooyo waan lashaqeyneynaa waana gaarabtaganahey laakiin ninkii raba inuu dumiyo gurigii shalay ladayactiray ragow maxaaad katiraahdeen?” Hadalkaas oo soo jiitey dhageystayaasha ayaa mar qura sacab iyo sawan kutaageeray.
Fanaaniin ay kamid ahaayeen Saynab Labodhagax, Khadro Cumar Dhuule, Fartuun Cumar iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa ka qaaday heeso wadani ah oo dadkii daawanayey ay la dhaceen, sidoo kale waxaa lagu soo bandhigey majaajilo, gabayo iyo waliba buraanbur guud ahaanba katurjumaya maalmaha taakhiga u’ah Soomaali meel ay joogtaba iyadoo gabayadii halkaasi laga qaadey qaarkood ay dadkii ilmo ka keeneen.
Willmar, Mareykanka 2012:
Somalida degan Willmar oo si weyn ugu dabaaldegay maalinta 1-da Luulyo
Munaasabada kowda luuliyo ayaa maanta lagu xusey magaalada Willmar ee gobolka Minnesota ee cariga dalka mareykanka ,dabaaldagaan ayaa waxaa isku soo duba-ridey Jaaliyada dumarka Somalida (Somali Women) oo gacan ka heleyso African Development Center ,waxana ka soo qeyb galey odayaal, dhalinyaro iyo dumarka ku dhaqan magaalada Willmar ee gobolka Minnesota.
Edmonton, Kanada 2012:
Soomaalida Edmonton oo Wadajir ugu Dabaaldagtey 1da Luulyo
Shalay ayaa si habsami ah ay Soomaalida Edmonton wadajir ugu ciidey bariga magaalada. Dabaaldagan 1da Luuliyo ayaa waxaa si wadajir ah usoo qabanqaabiyey uruada Soomaalida ee magaalada oo igu sanadihii hore gooni gooni udhiganjirey xafladaha caamka ah ee bulshada ka dhaxeeyo. Dabaaldagan oo ay kasoo qaybgaleen dad lagu qiyaasay 2000 oo qof ayaa ahaa mid laga cabsi qabey in uu baaqda kadib markii ay roobab lixaadlihi da-een galingii hore. Balse roobabkaasi ma-aysan noqon kuwo dib udhigo himilada shacabkii u oomanaa in ay meel kuwada dabaaldagaan.
London, Ingiriiska 2012:
Khartuun, Suudaan 2012 (laba xafladood):
1-da Luulyo oo si weeyn looga xusay Magaalada Khartuun
Munaasabad lagu xusay 1 Da Luuliyo iyo Sanad Guurada 52 aad ee Xornimada iyo Midnimada Shacabka Soomaaliyeed, ayaa waxay ka dhacday Hoolka Shirarka Caalamiga ah ee Ribaad Al-wadani ee Magaalada Khartoum Caasimada dalka Sudan.
Munaasbada oo si heer sara ah loo soo agaasimay isla mar ahaantaana ay ka soo qeeyb galeen madax iyo Xubno ka tirsan Jaaliyada Soomaaliyeed ee Sudan, Madaxda Midawga Ardayda Soomaaliyeed ee Sudan ee Sanad kaan la doortay iyo Madaxdii Sanadkii hore ee uu xilkoodu dhamaaday, Marti sharaf reer Sudaan ah iyo waliba Qeeybaha kala duwan ee Ardayda Soomaaliyeed hablo iyo Wilalba ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamijyo ay u wada riyaaqeen guud ahaan ka soo qeeyb galayaashii Munaasabada yimid.
Mambaasa, Kenya 2012:
1-da luulyo oo maanta si weyn looga xusay magalada Mambaasa
Ciyaar kubbadda cagta ah oo lagu maamuusayay 52 guurada ka soo wareegtay xorriyaddii gobollada koonfureed ee Soomaaliya iyo israacii koonfur iyo waqooyi ee 1-dii Luulyo sanadkii 1960-kii ayaa maanta lagu qabtay garoonka weyn ee makadara ee magaladani Mambaasa.
Ciyaartaan oo ay hormuud ka ahaayeen gudiga jaaliyada Soomaaliyed ee ku dhaqan magaladani mombasa ayaa waxay dhex martay laba koox oo kala ahaa S.Y.L iyo Horseed kana dhisan magaalada Mambaasa.
Xaflad Lagu Xusayay Xuska Maalinta 1-da luulyo Oo Dalka Jabuuti Ka Dhacday
Xaflad aad U Baalaaran oo ay kasoo qayb galeen masuuliyiin ka kala socota somalia, Djibouti Iyo Puntland Ayaa Waxaa Xalay Lagu Qabtay Safaarada Soomaalida ee Jabuuti.